मोडलिङमा भविष्य खोज्दै रियासा - Primekhabar.com
कला मनोरञ्जन समाचार सोसल मिडिया
मोडलिङमा भविष्य खोज्दै रियासा
१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार August 28, 2020 प्राइम खबर डेस्क	0 Comments
मोडलिङमा प्रवेश गरेकी नव मोडल हुन् रियासा गिरी । नेपाली सिने क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गरेकी नव मोडल रियासाले नृत्य गरेको दुई वटा म्युजिक भिडियो अहिले चर्चामा छ । ‘क कछुवा ख खरायो,’ भन्ने गीत अहिले युट्युबको ट्रेंडिंगमै छ । शुभारम्भ डिजिटलको युट्युब च्यानलमा राखिएको सो भिडियो लाखौँ पटक हेरिएको छ ।
कुनै पनि क्षेत्रमा मेहनत र परिश्रम बिना कुनै पनि कार्यमा सफलता पाउन असम्भबनै छ । सिने नगरीमा नाम र दाम कमाउने चाहाना सबैको हुन्छ । नाम कमाउन अनि चर्चित हुने रहर सबैको हुन्छ त्यही अनुसार आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै अघि बढेकी छिन् रियासा गिरी ।
लक नै भन्नुपर्छ उनले सुरुमै खेलेका दुई वटा भिडियो चर्चित छ।
युवा पुस्ताको आकर्षणमा रहेको रङ्गिन संसार अर्थात् मोडलिङ संसारमा रमाउन नचाहने युवा पुस्ता सायद कमै मात्रामा होलान् । नाम कमाउन अनि चर्चित हुने सबैको चाहना हुन्छ । त्यस्तै चाहना लिएर मोडलिङको भिडमा आफूलाई स्थापित गराउन यस जगतमा आफ्नो भविष्य बनाउने योजनाको साथमा अगाडी बढ्दै गरेकी नव मोडल रियासा गिरी अहिले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न दिन रात लागिपरेकी छिन । त्यसै अनुरूप सफलता समेत हात पारेकी छिन् ।
प्युठानमा जन्मिएकी उनी विगत केही वर्षदेखि काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाउँदै मोडलिङ क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दै आएकी छिन् । मोडल रियासा गिरीले भिडियो बाहेक विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति समेत दिर्दैं आएकी छिन् । अभिनय तथा नृत्यमा पोख्त उनी सुन्दर मुहार र आकर्षक शरीरको धनी छिन् ।
चिटिक्क मिलेको शरीर अनि सुन्दर मुहार नै उनी प्रतिको आकर्षण हो । उनी मेहनतका साथ अभिनय र कलालाई अझै निखारता ल्याउँदै मोडलिङ तथा सिने नगरीमा स्थापित हुन चाहन्छिन् । सानै उमेरदेखि मोडल तथा नायिका बन्ने सोच र रुचि राख्ने अनामिका अभिनयमा पनि आफूलाई अब्बल दर्जामा राख्न कोसिसरत छिन ।
उनी भन्छिन्, ‘अब चलचित्र र मोडलिङमै क्यारियर बनाएर स्थापित हुन्छु र यही क्षेत्रमा आफ्नो ट्यालेन्ट, क्षमता प्रदर्शन गरेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँछु ।’
सानै उमेर देखिको रहर पुरा गर्न तथा नेपाली समुदायमा मोडलिङ क्षेत्र प्रतिको सोचलाई परिवर्तन गर्न यस क्षेत्रमा लागेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘म मा विश्वास छ र दृढ निश्चयका साथ मेरो उद्देश्यमा निरन्तर लाग्न सकेँ भने संसारको कुनै पनि तागतले मलाई रोक्न–छेक्न सक्दैन ।’
सपिङ तथा फोटोग्राफी मन पराउने उनी नयाँ नयाँ ठाउँ भ्रमण गर्न रुचि राख्छिन् । चलचित्र, म्युजिक भिडियो खेल्ने तथा सिने क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने उनको रुचि छ । फोटो सुट गर्न पनि उनलाई खुबै मन पर्ने बताउँछिन् । सधैँ हाँसेर बोल्ने मिठो मुस्कान, सुन्दर मुहार र बौद्धिक क्षमता भएकी प्रतिभावान् मोडल रियासा गिरी आफ्नो मोडलिङलाई समाजसेवा मार्फत समाजमा सकारात्मक सोचहरू फैलाउन चाहन्छिन् ।
← ‘कालीमाटी बजारमा व्यापारी र उपभोक्ता दुवैले मास्क पनि लगाउँदैनन्’, जोखिम झन् बढ्यो
२४ घण्टामा १२ संक्रमितको मृत्यु, कति पुग्यो मृतकको संख्या ? →
के दशैंमा फेरि लकडाउन हुन्छ र ?
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार प्राइम खबर डेस्क	0
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार प्राइम खबर डेस्क	0
सडकमा पुगेर प्रचण्ड-माधवले भने- ‘हामी यहाँ छौं’